Ku soo dejiso WhatsApp Plus bilaash, ku dar waxyaabo dheeraad ah! | Androidsis
Whatsapp lagu daro waa wax ka badal lagu sameeyay barnaamijka caadiga ah ee WhatsApp kaas oo noo ogolaanaya inaan qaabeyno iyo waxay leeyihiin shaqooyin cusub oo dheeri ah Codsigeena WhatsApp, waa habka ugu fudud ee looga faa iideysan karo macmiilka fariimaha deg dega ah ee ugu caansan meeraha. Waxaan u fahmi karnaa WhatsApp Plus "mod", taas oo ah, codsi wax laga badalay oo noo ogolaanaya inaan leenahay howlo badan oo badan iyo qaabeyn ballaaran, oo ay fuliyaan khubaro kombuyuutar ah oo doonaya inay ka faa'iideystaan ​​inta badan barnaamijyada haddii kale aad u xaddidan .
Waqtigan xaadirka ah, WhatsApp Plus ayaa si buuxda loo heli karaa inkasta oo cadaadiska ay abuurayaasha WhatsApp ku kiciyeen inay isku dayaan inay ka saaraan "mod" dhammaan server-yada soo dejinta. Tan waa ku mahadsan tahay nooca wax laga beddelay ee Whatsapp Waxaan u habeyn karnaa sida dadka kale ay noo arkeen annaga oo isku xirna, in dhowr wada sheekeysi la furo isla waqtigaas, iyo xitaa wax ka beddelno halka ay astaamo kasta ka muuqato dalabka.
1 Sida loo soo dejiyo WhatsApp Plus bilaash
2 Sida loo rakibo WhatsApp Plus ReBorn
3 Halkee lagala soo bixi karaa noocii ugu dambeeyay ee WhatsApp Plus
4 WhatsApp Plus Holo iyo WhatsApp Plus Jimods
Sida loo soo dejiyo WhatsApp Plus bilaash
Ku rakibidda WhatsApp Plus waa wax fudud oo qof walba gaari karo. Ugu horreyntii waxaan sheegi doonnaa in WhatsApp Plus laga heli karo aaladaha Android, aaladaha iPhone-ka waxaa lagama maarmaan ah in Jailbreak la sameeyo oo noocyada WhatsApp Plus ma xasilloon yihiin, taas oo horseedi karta in koontada la xannibo, sidaas darteed waxaan ayaa ku baraya ku rakib WhatsApp Plus for Android.
Ka hor soo dejiso WhatsApp Plus bilaash oo rakib, ugu horreyntii waxaan sameyn doonaa nuqul nuqul ah oo ku saabsan dhammaan sheekaysiga WhatsApp, tan waxaan u aadaynaa: WhatsApp Settings> Settings Chat> Save Wadahadal. Markii aan badbaadinno, waxaan sii wadeynaa inaan ka saarno arjiga.
Waxaan soo dejisanay .Apk ee WhatsApp Plus oo Isbaanish ah ka soo socda LINK.
Sida loo rakibo WhatsApp Plus ReBorn
Marka la soo dejiyo, waxaan si fudud u tagnaa qaybta soo dejinta ee qalabkayaga Android oo aan u sii socono rakibidda. Markii la rakibo waa inaan sii wadnaa inaan galno lambarka taleefankayaga, anagoo raacayna isla nidaamka markasta oo aan rakibno nooca caadiga ah ee WhatsApp.
Waa inaan sugnaa dhowr daqiiqadood kaydinta wada sheekaysiga ee aan gadaal ka samaynay mid ka mid ah talaabooyinka ugu horeeya ee dib loo soo celin doono. Waxaan si toos ah u arki doonaa shaqooyinka cusub midigta kore, astaanta cusub ee WhatsApp leh "+" calaamadda badhtanka.
Halkee lagala soo bixi karaa noocii ugu dambeeyay ee WhatsApp Plus
WhatsApp Plus ReBorn wuxuu hubin doonaa wixii cusbooneysiin ah oo si otomaatig ah ayuu u cusbooneysiin doonaa, laakiin haddii aad u baahan tahay inaad soo dejiso nuqulkeedii ugu dambeeyay, waxaad aadi kartaa bogga rasmiga ah ee 'LINK' soo dejiso WhatsApp Plus oo si toos ah u soo dejiso si aad dib ugu rakibto iyada oo leh tallaabooyinka kor ku xusan.
WhatsApp Plus Holo iyo WhatsApp Plus Jimods
Sanadkii 2014 kii Wax ka beddelka holo ee WhatsApp Plus, waa nooc ka mid ah WhatsApp Plus kaas oo kuu oggolaanaya inaad rakibato interface-ka Android Holo, hase yeeshe, noocani waxaa la joojiyay bartamihii-2015 sababtoo ah xaqiiqda ah in aaladaha Android badankood ay horay u isticmaaleen is-dhexgalkan.
Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale helnaa nooca caanka ah WhatsApp Plus Jimods, oo ah nooc la habeeyay taasina waxay kuu ogolaaneysaa inaad qariso xaalada WhatsApp gebi ahaanba, soo degsashadeedu waa mid aad u fudud. Si aad u rakibto waa inaad ka tirtirtaa nooc kasta oo rasmi ah ama wax laga beddelay ee WhatsApp aaladda oo aad sii wadataa inaad ku rakibto tan .apk si toos ah xusuusta qalabkaaga, sidaa darteed xitaa waad u isticmaali kartaa kiniin ku rakib whatsapp.